သားအိမ်ကင်ဆာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေး (ရှားစောင်းလက်ပက်) – Tameelay
အသက် ၃၀ အရွယ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါတွေကိုင်ပြီး ချမ်းသာချင်သူများ ဒီအချက်တွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ ချမ်းသာဖို့ ဆိုရင် ငွေနောက်ကိုလိုက်ပါ ကနေ့ ခေတ်စီးပွားရေးအရဆိုရင် သမရိုးကျနည်းတွေနဲ့ ချမ်းသာဖို့ ကခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ပထမဆုံးခြေလှမ်းကတော့သင့်ဝင်ငွေတိုးလာဖို့ အာရုံစိုက်ရမယ်။ငွေတွေထပ်ခါ ထပ်ခါဝင်နေဖို့ အာရုံစိုက်နေရမယ်။ခုငွေနောက်ကိုစလိုက်ပါ။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာ ငွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာပြီး အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် မကြွားဝါပါနဲ့ ။ တိတ်တဆိတ်ကြိုးစားပါ သင်ရဲ့လုပ်ငန်း သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေက ဝင်ငွေမပေါသေးဘဲနဲ့ တန်ဖိုးကြီးကားတွေ, တန်ဖိုးကြီးနာရီတွေဝယ်မဝတ်ပါနဲ့ ။သင့်အလုပ်ကြောင့်လူသိပါစေ။သင်ဝယ်တဲ့အရာတွေကြောင့်လူမသိပါစေနဲ …
သင့်ဇနီးဆိုတာ … ၁။ သင့်ဇနီးသည်ဟာ ပြည့်စုံသူမဟုတ်လို့ သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ၂။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်အရိုးထဲကအရိုးဖြစ်လို့ သူ့ကိုမရိုက်ချိုးပါနဲ့။ ၃။ သင့်ဇနီးဟာ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်၊ တန်ဖိုးထားပါ။ ၄။ သင့်ဇနီးဟာ ရှားပါးတဲ့ကျောက်မျက်အရိုင်းလေးဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ မနာလို စိတ်လေးတွေကို လမ်းမှန်တည့်ပေးပါ။ ၅။ သင့်ဇနီးဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါ၊ သူ့ကိုရင်းနှီးစွာဆက်ဆံပါ။ …
ထမင်းစားစဉ် ဘာလို့ ရေခဲရေမသောက်သင့်သလဲ ?(ရေခဲရေသောက်မှ ရင်လေးအေးသွားတာပဲ ဆိုတဲ့သူများ ဖတ်ပေးနော်)
ထမင်းစားစဉ် ဘာလို့ ရေခဲရေမသောက်သင့်သလဲ ?(ရေခဲရေသောက်မှ ရင်လေးအေးသွားတာပဲ ဆိုတဲ့သူများ ဖတ်ပေးနော်) ထမင်းစားနေစဉ်နှင့် ထမင်းစားပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်အချိန်အတွင်း ရေခဲရေ၊ အလွန်အေးသောရေနှင့် အအေးမျိုးစုံတို့ကို မသောက်သုံးသင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးစာမျက်နှာများမှာ မကြာခဏ ဖတ်ရှုရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ထမင်းစားစဉ် ရေခဲရေသောက်သော လူများနှင့် ရေနွေးသောက်သောသူများကို …